दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनदुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस)
December 21, 2020 admin मनोरंजन 7141
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो । के छ भिडियोमा ? एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् ।**भिडियो हेर्न तलको लिन्क खोल्नुहोला**
तौल बढ्ने सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ ।समस्या समाधानमा कठीन सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग गर्नाले हामी त थाक्छौ नै यसका साथै हाम्रो ब्रेन पनि थाक्ने गर्छ । जसका कारण कुनै पनि समस्याको सजिलै समाधान निकाल्न सकिदैन । हामीमा सोच्ने शक्तिको कमी हुन्छ ।दिमागलाई असर सुत्ने बेला मोबाईल फोनको प्रयोग गर्नाले दिमागलाई धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण मेमोरी लसको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।अंधेरोमा मोबाईल प्रयोग गर्नाले आँखामा धेरै प्रेशर पर्छ । जसले गर्दा आँखा रातो र कमजोर हुने समस्या हुन सक्छ । यसले आँखाको समस्या बढ्ने गर्छ ।निन्द्रामा समस्या यदि तपाँई मोबाईल छेउमा राखेर सुत्नुहुन्छ भनेपनि तपाईको लागी ख’तरा पनि छेउमै हुन सक्छ । मोबाईल छेउमा राख्दा नोटीफिकेशन अन अफ ,र भाईब्रेशनका कारण निन्द्रा गडबड हुन्छ । निन्द्रा पुरा भएन भने हामीलाई काम गर्न कठीन पर्छ ।ध्यान दिन नसक्नु मोबाईलको प्रयोग रातीमा गर्नाले फोकसमा समस्या हुन्छ । यसले हामीमा ध्यान दिने र सुन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । डिप्रेसन यदि तपाई मोबाइल चलाईरहनु हुन्छ भने तपाईलाई डिप्रेसन भएको हुनसक्छ ।
November 27, 2020 admin मनोरंजन 6009
August 2, 2020 Administer Banner Post, अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 403559
November 24, 2020 admin मनोरंजन 4506
LEX 18 agenda conversation: Job club (403559)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378202)
Hello world! (313844)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (288628)